J.O – Lomano “relai 4 x 200 m” : norombahin’ny Sinoa ny medaly volamena - ewa.mg
News - J.O – Lomano “relai 4 x 200 m” : norombahin’ny Sinoa ny medaly volamena
Lasan’ny atleta sinoa misehatra eo
amin’ny taranja lomano ny medaly volamena, nandritra ny lalao
famaranana “relai 4 x 200 m” vehivavy , omaly. 7 minitra 40
segondra sy 33 ampahazatony no nahavitan’i J.X Yang, i M.Tang sy i
B.Li ary i Y.Zhang io halavirana io. Ampy nandrombahan’izy efa-bavy
ny medaly volamena nanoloana ny mpilomano amerikanina izay nahavita
7 minitra 40 segondra sy 73 ampahazatony io fe-potoana vitan’izy
ireo io. Nitana ny laharana faharoa, noho izany, ny Amerikanina ary
nanaraka azy ry zareo Aostralianina. Etsy ankilany, mitovy isa ny
medaly volamena azon’ny Sinoa sy ny Japoney amin’ity fifaninanana
ity, amin’izao fotoana. Samy manana medaly volamena miisa 15 izy
ireo, saingy manan-tombo amin’ny fitambaran’ny isa eo amin’ny
medaly volafotsy sy ny alimo ry zareo Sinoa. Mitana ny laharana
vonjimaika alohan’ny mpampiantrano indray noho izany ny Sinoa.
L’article J.O – Lomano “relai 4 x 200 m” : norombahin’ny Sinoa ny medaly volamena a été récupéré chez Newsmada.
Nash Events: eo am-panomanana ny rindrantsary “medley” voalohany
I Nasolo, fantatry ny maro amin’ny hoe Nash. Namorona ny Nash Events. Misehatra eo amin’ny tontolon’ny fampadihizana efa nandritra ny taona maro ny lehilahy… Mitohy ny lalany…Tena nampiavaka azy manokana ny fampiarahana ny fihirana sy ny fikapohana amponga maroanaka tao amin’ny tarika mpampandihy nisy azy teo aloha. Nanana faniriana hanangana ny ekipany manokana i Nasolo. Izao tanteraka izao izany. Ireo traikefa rehetra azony hatramin’izay no atambany, ankehitriny, hanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa, raha ny fanazavany. Misehatra eo amin’ny fanafanana lanonana ary manana ny karazana tolotra maromaro azo isafidianana izy ireo amin’izany. Misy ny “animation avec orchestre complet”, ny “animation séquence” ary ny “animation DJ”, sns…Eo am-panomanana ny rindrantsary “medley” voalohany ny Nash Events. Efa hivoaka tsy ho ela intsony izany satria anatin’ny fikarakarana tanteraka izy ireo ankehitriny, raha ny filazan’ny tompon’andraikitra. “Ho fanomezana fahafaham-po ny rehetra, miezaka hatrany izahay mampifandanja sy mandrindra ny fandaharan-kira (repertoire) mba samy hahazo tsirony avokoa na ny zokinjokiny na ny tanora anatin’ny lanonana. Izany hoe, tsy voafetra ho ny vaovao ihany no hirainay fa tetezinay avokoa ny taona rehetra, mandritra ny fanentanana tontosain’ny Nash Events”, araka ny nambaran’i Nash.Mampiavaka ny Nash Events ny famondronana tanora manana talenta eo amin’ny sehatry fampandihizana. Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ry zareo, na olon-tsotra na fikambanana na orinasa na mpikarakara lanonana isan-karazany. « Noforonina ny pejy facebook Nash Events ahafahana mifanerasera », hoy hatrany izy.Narilala L’article Nash Events: eo am-panomanana ny rindrantsary “medley” voalohany a été récupéré chez Newsmada.
Hetsika « Tagnamaro »
Nandray anjara tamin’ny hetsika « Tagnamaro » andron’ny olom-pirenena ny minisiteran’ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo, ny faran’ny herinandro teo, teny amin’ny CSB II, teny amin’ny kaominina Sabotsy Anjiro. Niara-nientana ny fokonolona sy ny mpiasan’ny minisitera nanadio sy nanavao io tobim-pahasalamana io. Nanatsara sy nanadio ireo tranon-jiron’ny Jirama ihany koa ireto mpiasan’ ity minisitera ity sy ny mpiasan’ny Jirama, nampian’ny Samva. L’article Hetsika « Tagnamaro » est apparu en premier sur AoRaha.
Nafenina tao anaty… “power bank”: tratra ilay karana saika hanondrana volamena 190,63 g
Tsy anatiny tsy ivelany fa mitohy hatrany ny fanondranana ny harem-pirenena eto amintsika amin’izao fotoana izao. Teratany karana iray indray ny nahatrarana volamena milanja 190,63 g tao amin’ny seranam-piaramanidina Nosy Be, afakomaly. Natao tao anatin’irony fitaovana antsoina hoe “Power Bank” irony ilay volamena ary natao naka tahaka ny endrika vatoaratra. Nokasaina haondrana any Addis-Abeba ireto harem-pirenena sarobidy ireo ka izao tra-tehaka izao. Efa eo am-pelatanan’ny manam-pahefana ny raharaha amin’izao fotoana izao ary andrasana ny tohin’ny fanadihadiana.Tsiferana RandriatianaL’article Nafenina tao anaty… “power bank”: tratra ilay karana saika hanondrana volamena 190,63 g a été récupéré chez Newsmada.
Tsy mbola hita ilay vehivavy, 37 taona, voatondro ho nahafaty ny vadiny, 50 taona, tany Andapa, andro vitsy lasa izay. Voa teo amin’ny taovam-pananahany ilay lehilahy, nandritra ny fifamaliana sy ady nisy teo amin’izy mivady. Mbola afaka niantso vonjy izy saingy namoy ny ainy teny an-dalana nitondrana azy tany amin’ny hôpitaly. L’article Nahafaty vady est apparu en premier sur AoRaha.
Mpianatra mozika ao amin’ny CNEMD: nahatontosa ny seho famaranana ny taom-pianarana
Mbola misy ary tafaverina amin’ny lazany ny CNEMD! Porofon’izany ny lentan’ny fampisehoana, ho famaranana ny taom-pianarana nataon’ireo mpianatra mozika sy dihy ao amin’ity ivontoeram-piofanana nasionaly momba ny mozika sy dihy ity. Notontosaina ny tolakandron’ny asabotsy teo ny seho, tao amin’ny efitrano Dox, ao amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy. Tao anatin’ny 10 andro fotsiny no nanomanan’ireo mpianatry ny CNEMD tsirairay ny fanadinana, nanehoan’izy ireo ny vokatry ny ezaka niombonany tamin’ny mpampianatra. Miisa 276 ireo mpianatra tamin’iny taom-pianarana nivalona iny, ka 134 ireo niatrika ny fanadinana. Mizara arakakara ny sokajy ireo mpianatra, izay ahitana ny mpianatra zavamaneno toy ny piano, ny gitara, ny flute, amponga maroanaka, violon ary violoncello. Eo koa ny ao amin’ny sokajy hira. Misy karazany maro toy izany koa ny ao amin’ny sokajy dihy. Isan’ireo nanaraka ny fiofanana ry zalahy Zazakanto, teo amin’ny hira sy zavamaneno, ary azo tsapaina ny fivoarana lehibe. Nanatrika ny seho famaranana ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Andriatongarivo Lalatiana, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy sy ireo ray aman-drenin’ny mpianatra. Fantatra fa amin’ny volana septambra ho avy izao ny fidirana manaraka ao amin’ny CNEMD.Zo ny AinaL’article Mpianatra mozika ao amin’ny CNEMD: nahatontosa ny seho famaranana ny taom-pianarana a été récupéré chez Newsmada.
Lova Santatra : “Tanjona ny mba hiakanjoan’ny olona rehetra ny vita malagasy”
Andriamaherinirina Lovatiana na, Lova Santatra eo aminy maha mpanakanto azy. Nanomboka ny taona 2007 izy no nisehatra teo amin’ny tontolon’ny haihaingo sy ny famoronana lamaody. Maro ny sehatra nanehoana ny talentany…Anisan’ny mampiavaka an’i Lova Santatra ny fampiasana ny akora rehetra dia vita eto an-toerana, fa ny kalitaon’ny asa kosa, ny didiny rehetra dia maka ny endriny amin’ny any ivelany avokoa mba tsy hivoana amin’ny endriny niandohany ny famoronana. Manavanana azy amin’ny fanaovana zavakanto ny fanodinana zavatra maro toy ny akora vita amin’ny tandrok’omby akorandriaka,taolam-boanio, ampiarahana amin’ny karazan-damba soga, lin, landy,… sns. Etsy Sa­botsy Namehana ny toeranam-pamokarana ahavitana izany. «Ny tanjona dia ny mba hiakanjoan’ny olona rehetra ny vita malagasy , ary raha ho an’ny ivelany, mba hampisehoana ny vita eto Mada­gasikara tahaka ireo olona hafa firenena, mianjaika ny azy izany», araka ny nambarany. Ho an’i Lova Santatra ma­nokana, maro ireo trano filanonana efa nanehoany filatroana, toy ny Cercle Germa­no Malagasy (Analakely ) , ny Cercle Mess de Betongolo , ny Carlton (Anosy ), ny Hotel Colbert Antaninarenina, ny Paon d’OR Ivato sy ny Tse­nabe iraisam-pirenena teto Madagasikara (Foire Inter­nationale de Madagascar) teo koa ny any amin’ny faritra, izay nisian’ny fiaraha-miasa tamin’ny Alliance Francaise Ambatondrazaka .Misokatra amin’ny fiaraha-miasa rehetra ny tenany, amin’ny fanandratana ny famoronana lamaody sy ny tontolon’ny haihaingo, manana ny tambajotran-tsarasera “Facebook” “Lova Santatra” izy ho an’izay liana amin’ny zavatra ataony”NarilalaL’article Lova Santatra : “Tanjona ny mba hiakanjoan’ny olona rehetra ny vita malagasy” a été récupéré chez Newsmada.
Amboasary, Ambovombe: niakatra ny tahan’ny ankizy tsy ampy sakafo
Mihamafy ny tsy fanjarian-tsakafo mianjady amin’ny mponina any atsimon’ny Nosy, raha ny tatitra nataon’ny fandaharanasam-pirenena momba ny sakafo (Pam). Nitombo 59% ny tahan’ny ankizy raisina an-tanana manokana noho ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo azy. Niakatra ny taha raha oharina ny tamin’ny taon-dasa tamin’ireo distrika efatra ao atsimo dia i Amboasary, Ambovombe, Bekily ary Ampanihy, izay tena efa mitofezaky ny hanohanana tanteraka.Manohy ny asa fanampiana ara-tsakafo manoloana ny vanim-potoana maitso ahitra ny Pam. Manodidina ny 10.000 ireo ankizy raisina an-tanana any atsimon’ny Nosy, amin’izao fotoana. Maherin’ny 400.000 kosa ireo olona izarana sakafo.Misy ny asa maika hatao hamonjena ny ain’ireo ankizy 135.000 mijaly fatratra amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mivaivay nandritra ny haintany ny volana janoary hatramin’ny avrily lasa teo.Tatiana A L’article Amboasary, Ambovombe: niakatra ny tahan’ny ankizy tsy ampy sakafo a été récupéré chez Newsmada.